फोटोशूटका कारण दिशा पटानी ट्रोलको शिकार, के नराम्रो छ यी फोटोहरूमा ? – Dcnepal
फोटोशूटका कारण दिशा पटानी ट्रोलको शिकार, के नराम्रो छ यी फोटोहरूमा ?
प्रकाशित : २०७६ साउन २६ गते १६:३०
काठमाडौं। बलिउड अभिनेत्री दिशा पटानी आफ्नो लुक्स र सुन्दरताका कारण प्रायः चर्चामा आइरहन्छिन्। उनले सामाजिक सञ्चालमा तस्विरहरू पोस्ट गरेलगत्तै तीव्र रूपमा शेयर हुने गर्छन्। फेरि एक पटक उनका तस्वीरहरूले सामाजिक सञ्जालमा तहलका मच्चाएका छन्।
यी तस्वीहरूमा उनी निकै सुन्दर देखिएकी छन्। यो फोटो सुटमा दिशा बाथरुममा छिन् र उनले अलगअलग पोज दिएकी छन्। तर यो कुरा मानिसहरूलाई मन परेको छैन। त्यसपछि उनलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिएको छ। दिशा ब्ल्याक वान पिसमा निकै ग्ल्यामर देखिएकी छन्। उनले कपल खुल्ला राख्नुका साथै आँखामा गहिरो मेकअप गरेकी छन्। हाइ हिलका साथमा उनको सुन्दरता अझै खुलेको छ।
यद्यपि कैयौँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई उनको यो फोटो सुट मन परेन। र उनीहरूले दिशालाई ट्रोल गर्न सुरु गरेका छन्। एक युजरले लेखेका छन्, ‘मैले सोचेको थिएन बाथटप पनि फोटो सुट गर्ने ठाउँ बन्छ भनेर’ अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बाथरूम सुत्ने ठाउँ पनि होइन भन्दै उनको खिल्ली उडाएका छन्।